Japan Races to Build New Coal-Burning Power Plants | Myanmar Business Today
Home Business Regional Japan Races to Build New Coal-Burning Power Plants
A coal-burning power plant under construction is reflected in the window of Satsuki Kanno’s apartment overlooking Tokyo Bay, in Yokosuka, Japan, December 27, 2019.
Hiroko Tabuchi (The New York Times)
It is one unintended consequence of the Fukushima nuclear disaster almostadecade ago, which forced Japan to all but close its nuclear power program. Japan now plans to build as many as 22 new coal-burning power plants – one of the dirtiest sources of electricity – at 17 different sites in the next five years, just atatime when the world needs to slash carbon dioxide emissions to fight global warming.
“Why coal, why now?” said Kanno,ahomemaker in Yokosuka, the site for two of the coal-burning units that will be built just several hundred feet from her home. “It’s the worst possible thing they could build.”
A target of the activists’ wrath has been Japan’s new environment minister, Shinjiro Koizumi,acharismatic son ofaformer prime minister who is seen asapossible future candidate for prime minister himself. But Koizumi has fallen short of his predecessor, Yoshiaki Harada, who had declared that the Environment Ministry would not approve the construction of any more new large coal-fired power plants, but lasted less thanayear as minister.
Koizumi has shied away from such explicit promises in favor of more general assurances that Japan will eventually roll back coal use. “While we can’t declare an exit from coal straight away,” Koizumi said atabriefing in Tokyo last month, the nation “had made it clear that it will move steadily toward making renewables its main source of energy.”
What Tokyo Electric proposed next – the two new coal-powered units – has left many in the community bewildered. To make matters worse, Tokyo Electric declared that the units did not needafull environmental review, because they were being built on the same site as the oil-burning facilities.
Satsuki Kanno၏ အခန်းပြတင်းကလေးမှ ကျော်၍ ကြည့်လိုက်လျှင် ပြီးခဲ့သည့်ခေတ်မှ သတ္တဝါကြီး မကြာမီနိုးထလာတော့မည့် အနေအထားကို တွေ့မြင်နေရသည်။ အဆိုပါ သတ္တဝါကြီးမှာ ‌ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံကြီးဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖူကူရှီးမား နယူးက‌လီးယား မတော်တဆမှု၏ မမျှော်လင့်သော အကျိုးဆက်လည်းဖြစ်သည်။ ယင်းမတော်တဆမှုကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အခြားသော နယူးကလီးယားစွမ်းအင်အစိအမံများကိုပါ ပိတ်ချလိုက်ရသည်။ ယခုအခါတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသည် ကျောက်မီးသွေးသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်းအားပေးစက်ရုံပေါင်း ၂၂ ခုမှ အသစ် ထပ်မံတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျောက်မီးသွေးဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းများထဲတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အထိခိုက်ဆုံးနည်းလမ်းလည်း ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့်လည်း ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် လိုအပ်နေသည့် အချိန်လည်းဖြစ်သည်။
“ဘာဖြစ်လို့ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကို ဆောက်ရတာတုန်း။ ဘာဖြစ်လို့ အခုမှ ထလုပ်ရတာတုန်း” ဟု ကျောက်မီးသွေးသုံး စက်ရုံတည်ဆောက်မည့် နေရာဖြစ်သည့် Yokosuka ရှိ အိမ်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Kanno က ပြောသ်ည။ “တခြားဟာတွေဆောက်ရင်တောင် ဒီလောက် ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူး”
အဆိုပါ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံပေါင်း ၂၂ ခု၏ တစ်နှစ်စာ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုသည် အမေရိကန်ရှိ ခရီးသည်တင်ကား စုစုပေါင်း၏ ‌ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ညီမျှသည်။ ယခုကဲ့သို့ တည်ဆောက်နေမှုမှာ လာမည့် တိုကျိုအိုလံပစ် ပွဲတော်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးသော ကစားပွဲဖြစ်မည်ဟူသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပုံဖော်မှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။
Yokosuka စီမံကိန်းမှာ နယူးကလီးယားစွမ်းအင်အပေါ်တွင်သာ အာရုံစိုက်တတ်ကြသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များရှိသော ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ထူးထူးခြားခြား ဆန့်ကျင်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ သို့သော် အချို့သော ဒေသခံများကတော့ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံအသစ် တည်ဆောက်မည်ကို ခွင့်ပြုသည့်အပေါ် အစိုးရကို တရားစွဲနေကြသည်။
ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို ကောင်းစွာ လေ့လာသုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲ စီမံကိန်းများကို တင်ပြလာသည့်အတိုင်း ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်သည်ဟု တရားလိုရှေ့နေများက ဆုိသည်။
SOURCEHiroko Tabuchi (The New York Times)
Previous articleMinistry to Kick Start Elevated Expressway Project
Next articleKia in Talks over Moving $1.1 Billion Andhra Pradesh Plant